Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Manchester City Oo Lama Filaan Ugu Dhaqaaqday Lionel Messi, PSG Oo Hogaamineysa Tartanka Messi, Xaalada Kane Oo Mugdi Sii Gashay Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Manchester City oo Lama Filaan ugu Dhaqaaqday Lionel Messi, PSG oo hogaamineysa Tartanka Messi, Xaalada Kane oo Mugdi sii gashay iyo Qodobo kale
August 6, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Ku dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha maanta oo aad maalin walbo kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com
Ku dhawaaqista Barcelona ee ah in weeraryahanka reer Argentina Lionel Messi, oo 34 jir ah, uusan sii joogi doonin kooxda ayaa “albaabka u furtay inuu si lama filaan ah ugu dhaqaaqo” Manchester City. (Manchester Evening News)
Helitaanka Messi ayaa saameyn ku yeelan karta dhaq dhaqaaq kasta oo suurtagal ah oo ay Manchester City ku dooneyso weeraryahanka Tottenham iyo xulka England Harry Kane oo 27 jir ah (Express)
Paris St-Germain ayaa durbadiiba lala xiriiriyay Messi, laakiin caasimada Faransiiska ayaa loo arkaa inay tahay halka kaliya ee suurtogal u noqon karta xiddiga reer Argentina in aad looga baahanyahay. (Le Parisien)
PSG ayaa loo arkaa inay ugu cadcad tahay saxiixa xidiga lix jeer ku guuleystay Ballon d’Or, laakiin u dhaqaaqista Mareykanka si uu ugu ciyaaro Major League Soccer ayaan meesha ka marneen (Dailymail)
Soo jeedinta Romelu Lukaku ee ku laabashada Chelsea ayaa laga yaabaa inay istaagto iyadoo guddoomiyaha Inter Milan Steven Zhang uu doonayo inuu waqti qaato ka hor inta uusan go’aansan inuu doonayo inuu iibiyo 28 jirka weerarka uga ciyaara Belgium. (Gazzetta dello Sport)
Chelsea ayaa la filayaa inay dhammeystirto u dhaqaaqista ay Lukaku dib ugu soo celinayso Stamford Bridge dhamaadka Isbuucaan ka dib markii ay Inter u soo bandhigtay heshiis ku kacaya 95 milyan oo ginni iyo ku darista weeraryahan. (Dailymail)
Manchester United ayaa weli dooneysa inay la soo saxiixato daafaca reer England Kieran Trippier, laakiin Atletico Madrid ayaa diidan inay ka dhaadhiciso qiimaha ay ku dooneyso 30 jirkaan. (Thesun)
Daafaca dhexe ee reer France Raphael Varane, oo 28 jir ah, ayaa gaaray England si uu u dhammeystiro ku biiritaankiisa Manchester United ee Real Madrid, iyadoo daafaca lagu wado inuu dhammaystiro muddo karantiil ah ka hor inta uusan tijaabada caafimaadka marin. (Fabrizio Romano)
Arsenal ayaa dalab ku kacaya 17 milyan oo gini ka gudbisay weeraryahanka kooxda Lazio iyo xulka Argentina Joaquin Correa, oo 26 jir ah, kaas oo kooxda Roma ay u aragto mid aysan u baahneyn. (Sportwitness)
Southampton ayaa wax ka weydiisay saxiixa Tammy Abraham, oo 23 -jir ah, kaasoo amaah uga doonayaan Chelsea markii ay bilaabayaan raadinta badalka weeraryahanka kale ee reer England Danny Ings, oo 29 -jir ah, kaasoo ku biiray Aston Villa horaantii isbuucaan. (Talksport)
Arsenal ayaa qorsheyneysa inay la soo saxiixato goolhayaha reer England Aaron Ramsdale iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Norway Sander Berge oo ka socda Sheffield United, laakiin dalab dhan 50 milyan oo ginni ayaa laga yaabaa inaysan ku filneyn inay gacanta ku dhigaan 23 jirkaan. (DailyStar)
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Lyon Houssem Aouar, oo 23 jir ah, ayaa u diyaar ah inuu u dhaqaaqo Arsenal xagaagan. (TheSun)
Leicester City ayaa sare u qaadi doonta ugaarsiga daafac dhexe oo cusub ka dib markii daafaca 21-jirada France Wesley Fofana, oo lugta ka jabay intii ay socotay ciyaartii saaxiibtinimo ee Villarreal . (Sky Sports)
Tottenham ayaa qarka u saaran inay dalab £ 17m ah ka gudbiso 22 jirka Bologna iyo daafaca Japan Takehiro Tomiyasu. (FootballInsider247)
Jose Mourinho ayaa lala xiriirinayaa inay u dhaqaaqayo Fulham xidigeeda 25-sano jirka ee Cameroon Andre-Frank Zambo Anguissa, kaas oo kooxda ugu kici lahaa aduun fhan 21 £. (Sport Witness)
Brentford ayaa ku dhow inay 24-jirka garabka ka ciyaara ee reer Congo Yoane Wissa kala soo wareegto kooxda reer France ee Lorient . (Sky Sports)
Crystal Palace ayaa wadahadalo heer sare ah kula jirta kooxda Blackburn si ay heshiis ula gaarto 24 jirka weerarka uga ciyaara Ingiriiska Adam Armstrong, kaasoo lagu qiimeeyo ku dhawaad ​​20 milyan oo ginni. (Sky Sports)
Palace ayaa hogaamineysa loolanka saxiixa Armstrong, inkasta oo laga soo diiday dalabkii ugu horeeyay(Dailymail)